ကြယ်ပြာရဲ့ အိမ်ကလေး: June 2009
ဖေ့မွေးနေ့ (ဇွန်လ ၂၃ ရက်)
ဖေကြီးရေ ..... မနက်ဖြန်ဖေကြီးမွေးနေ့ဆိုတာ သမီး မမေ့ပါဘူး ... ဘာလိုလိုနဲ့ဖေကြီးတောင် အသက်(၆၅) ရှိသွားပြီနော် ....သမီးက အဲ့လောက်တောင်ရှိနေပြီမထင်ဘူးဖေကြီးရ ..... သမီးမျက်စိထဲမှာတော့ သမီးငယ်ငယ်ကတည်း ခုချိန်ထိဖေကြီးမျက်နှာက ဒီအတိုင်းပဲမြင်နေတာ ... ဒီနေ့ မွေးနေ့အထူးမို့လို့ဆိုပြီး မကန်တော့တော့ပါဘူး .. ဘာလို့လဲဆိုတော့ သမီးကနေ့တိုင်းမပျက်မကွက်ကန်တော့နေကျမို့လို့လေ ... ဒီနေ့မှာထူးပြီးကန်တော့ဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့ ... ဟုတ်တယ်ဟုတ် ... ဖေကြီးနဲ့ ခုနက ဖုန်းပြောတော့ သမီး ဖေ့မွေးနေ့အတွက် စာရေးမယ်လို့ မပြောလိုက်ရဘူး ... ဖေကြီးရေ ဖေ့မွေးနေ့မှာ သမီးတို့မိသားစု ဘုရားတူတူသွားချင်တယ် ... သမီးပြန်လာတော့ အငယ်ကောင်ကပြန်လို့မရ ... သူပြန်သွားပြန်တော့ သမီးကပြန်လို့မရနဲ့ မိသားစု(၅)ယောက် တူတူဆုံဖို့ဆိုတာလဲ မလွယ်လိုက်တာဖေကြီးရာ .... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေ သမီးတို့စကားပြောနေခွင့်တော့ရှိနေသေးတာပဲ ... အဓိကက ဖေနဲ့မေ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေဖို့ပါပဲ ....
မိသားစုအပေါ် သိပ်ချစ်တတ်ပြီး အရာရာ စိတ်ရှည်တတ်တဲ့ ဖေကြီး ... မိသားစုတစ်ခုလုံးပေါ် အပင်ပန်းခံပြီးတာဝန်ကျေခဲ့တဲ့ဖေကြီး ...
သားသမီးကို ရိုက်တာထက် ပါးစပ်နဲ့ထိရောက်အောင် ဆုံးမတတ်တဲ့ဖေကြီး .... စကားသိပ်များလွန်းတဲ့သမီးစကားတွေကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နားထောင်ပေးတဲ့ဖေကြီး .... သမီးရဲ့အောင်မြင်မှု့တွေကို ချီးကျူးပေးတတ်ပြီး သမီးစိတ်ဓာတ်ကျတိုင်း အားပေးတတ်တဲ့ဖေကြီး ..... အဖေလိုတစ်မျိုး သူငယ်ချင်းလိုတစ်သွယ်နဲ့နေပေးတတ်တဲ့ ဖေကြီး .... သမီးလေ ဖေကြီးကို ကျန်းမာစွာနဲ့ အသက်ရှည်စေချင်သေးတယ် ... တရားဘာဝနာပွားစီးပြီး အေးအေးချမ်းချမ်းလေး ကျေနပ်စွာနဲ့ ဘ၀ရဲ့အချိန်တွေကို ကုန်လွန်စေချင်သေးတယ် ... ပြီးတော့ ဆပ်မကုန်နိုင်တဲ့ ကျေးဇူးပေါင်းများစွာကို နိုင်သလောက်အစွမ်းကုန်ဆပ်ခွင့်လေးလဲရချင်သေးတယ် ....
ဖေကြီးမွေးနေ့တွေ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကျန်းမာစွာကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေ .......
Posted by ကြယ်ပြာ at 8:54 AM 11 comments Links to this post
ဒီပုံလေးက သူငယ်ချင်းတွေဆီကတဆင့်ရတဲ့ ပုံလေးပါ ... ရယ်ရလို့ သူငယ်ချင်းတွေကို ရှဲလိုက်ပါတယ် ...
Posted by ကြယ်ပြာ at 11:14 AM5comments Links to this post
ငါ နားလည်ပါတယ် ….
ငါကိုယ်တိုင်က နင့်ကိုဒုတိယနေရာပဲပေးနိုင်ခဲ့တာလေ ….
ဘာပြောရမလဲ … ဘာလုပ်ရမလဲ ….
ဘာလုပ်သင့်သလဲဆိုတာငါ သိပါတယ် …
ငါတို့လမ်းခွဲကြစို့ လို့ပေါ့ ….
နင်က “စိတ်မကောင်းဘူး” တဲ့လား …
ငါလဲ နင်နဲ့ထပ်တူပါပဲ ….
ခုချိန်မှာ နင့်ဘေးကငါထွက်မသွားပါဘူး ….
နင်ရော ငါရော ၀မ်းမနည်းဖြစ်အောင်
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:35 PM 14 comments Links to this post
ဒီပုံလေးကို သဘောကျလို့တင်လိုက်တာပါ ... သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဆီကရတာပါ ... ဆားချက်တယ်တော့လဲ မဟုတ်ပါဘူး ...း) ပုံလေးကို ကလစ်လုပ်ပြီး ချဲ့ကြည့်နော် ... စာတွေဖတ်မှ သဘောကျဖို့ကောင်းတာ ....
Posted by ကြယ်ပြာ at 10:53 AM 8 comments Links to this post
ကဗျာဆရာတွေက စကားလုံးလှလှတွေနဲ့ ဖွဲ့သီကြတယ် …
စာရေးဆရာတွေက စကားပြေလှလှတွေနဲ့ ရေးစပ်ကြတယ် …
ဒါပေမယ့် ဘ၀တွေကတော့ မလှရှာကြပါဘူး …
တခါတခါ လူဆိုတာတောင် မေ့မေ့သွားတယ် ….
စဉ်းစားဖို့တောင် ဦးနှောက်တွေက အားမရှိကြတော့ဘူး …
အလုပ်ပြီး အလုပ် ……..
စားဝတ်နေရေး ဒီအရေး(၃)ခု ပြေလည်ဖို့ကလွဲရင်
ကျန်တာတွေ ဘာမှမသိတော့တဲ့ဘ၀တွေ ……
ဘ၀ ဘ၀ချင်းဝါးစားခံရတဲ့ဘ၀တွေ …..
နာလို့နာနေမှန်းတောင် မသိကြတော့ဘူးလေ ……
ကဲ …. ဒီထက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာ ဘာရှိဦးမှာလဲ ……
Posted by ကြယ်ပြာ at 7:41 AM 10 comments Links to this post